Nhau - Nei iyovhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavha ichange iri mafuta leakage?
Nei girazi rekuvharavha gasket ichave leakage yemafuta?
Nguva zhinji injini inodonha isingadzivisike, Kunyanya kana iwe ukashandisa mafuta akashata, Pane zvakawanda zvisina kuchena mumafuta, Kwete chete zvinowedzera kupfeka uye kubvarura painjini,
Inogona zvakare kukonzera injini yemafuta kudonha.
Ngatikurukurei nezveZvimwe zvinobuda muvhavha yekamuri yevhavha.
Chii chinokonzeresa iyo vharuvhu kamuri kubuda. Ungaita sei nazvo?
Chii chinonzi injini vharavha yekuvhara gasket?
Injini vharuvha yakavharika gasket- inongozivikanwa sevhavha yemakamuri yekuvhara.Iyo inhengo yekunamatira yepamusoro chikamu cheinjini. Yakavharwa neinjini oiri inoenderana nepani yemafuta kuitira kuti mafuta asazodonhe kana injini ichimhanya. Musoro weiyi humbwa unoenderana nemuviri wesirinda, vharafu inoenderana inoiswa pamusoro weiyi humburumbira, uye iyo humburumbira muviri uri yakagadzirwa mukamuri yekumanikidza yakamanikidzwa, pasi pemamwe mamiriro ezvinhu, ichibvumira musanganiswa unotsva kuti upise mukati mayo Mukati wevhavha yekamuri yevhavhavhavha, yepasi silinda yekuvhara, yepasi humburumbira muviri, uye yepasi mafuta sump.
Nei iyovhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavha ichave oiri leakage?
1- Kukwegura kwevhavhavhavhavhavhavhavha inovhara gasketleads kune oirige leakage.
Chekutanga, iyo vharuvhu yekamuri gasket yakashandiswa kwenguva yakareba, ichikonzera kuchembera uye kurasikirwa kugona kuvhara mafuta leakage.Sealing gasket yezvinhu zverabha, nekuda kwehupenyu hwebasa remota hwakareba kwazvo, zvinhu zverabha zvinokwegura, zvigooma, zvichikonzera mukudonha kwemafuta.
Sezvo imba yevhavha iri panzvimbo yekumusoro yeinjini, oiri inoyerera ichidzika nemusoro wesilinda mushure mekudonha kwekamuri yevhavha, nekuti injini yemuviri iri kushanda
Pamatembiricha akakwira, mafuta anonamatira kumusoro kwemuviri anozobuda zvishoma nezvishoma, achiburitsa hutsi hunopisa.
Mune ino kesi, ingovhura iyovhavhavhavhavhavhavhavha yekamuri uye vhara gasket.valvevha gasketreplacement mutengo hauna kukwirira
2.-Yekumanikidza crankcase kufefetedza vharuvhu yakavharwa
PCV vharuvhu ye crankcase ventilation system yakavharirwa, inokonzeresa kumanikidza mukati memuchina uye pakupedzisira inokonzeresa kubuda kwemafuta pasi pekumanikidzwa.Kana kukanganisa uku kusingaonekwe, kunokonzeresa mamwe matambudziko gare gare, senge crankshaft oiri leakage zvichingoenda zvakadaro. zviri nyore kwazvo kuona kana iyo PCV vharuvhu iri kushanda zvakajairika: pasi pemamiriro asina basa, mamiriro anoshanda eiyo PCV vharuvhu inogona kugadziriswa ipapo nekuyedza kubviswa kweiyo crankcase inlet nemunwe wako.
Yekuongorora nzira yePCV vharuvhu ye crankcase yakamanikidzwa kufefetedza System:
Ita kuti injini isashande, bvisa vharuvhu yePCV kubva pombi yevhavha yesirinda, uye woongorora kana vharuvhu yePCV yakavharwa.Kana iwe ukaisa ruoko rwako pamubatanidzwa wevharuvhu wePCV, minwe yako ichanzwa yakasimba.
Imwe nzira yekuongorora ndeye kubvisa crankcase inlet pombi kubva kusefa yemhepo mushure mekuisa iyo PCV vharuvhu, uye zvinyoronyoro kufukidza crankcase nechidimbu chepepa. Kana kumanikidza kuri mudhirankidhi kuchiderera (nezve IMIn), zvinofanirwa kuve pachena kuti bepa remucheka rinodhonzwa rakanangana nekuvhurika kwepombi, uyezve, mushure mekumisa injini, bvisa vharuvhu yePCV uye woitarisa neruoko. Kana paine ruzha rwe "kubaya", iyo PCV vharuvhu inochinjika uye inowanikwa.
3- Kukundikana kwezvimwe zvikamu zveinjini kunotungamira mukudonha kwemafuta.
Kuchembera kweiyo pisitoni mhete yeinjini kunotungamira mukuburitsa chisimbiso. Kana injini ichimhanya nekumhanya, chiitiko che cylinder bobbing chikaitika, icho chinotungamira mukuwandisa gasi kumanikidza, uye mumatambudziko akakomba, inotungamira mukukuvara kwevhavhavhavhavha gasketsealant uye leakage yemafuta.
Uye zvakare, nekuda kwehurombo hwemafuta, yakakomba kabhoni kuunganidzwa kwepiston kunamatira, kumisikidzwa kwerabhavha gasket haina kuenzana, zvichikonzera kusaenzana simba, nezvimwe, matambudziko ese aya anozotungamira kukuvadzwa kwevhavhavhavhavha gasketand leakage yemafuta.
Kukuvadza kwekudonha kwerabha yekuvhara gasket
Teerera kukonzeresa kwevhavhavhavhavhavha gasketto leakage yemafuta .Kukuvadza injini.
Iko kune ingangoitika njodzi yekuchengetedza yakadai semoto unokonzerwa nemafuta anodonhedza muvhavhavhavha gasket.
Nekuda kwekudonha kwemafuta muvharo yekamuri yevhavha, iyo inodonha mafuta inoyerera ichidzika nemuviri weinjini. Nekuda kwetembiricha yakakwira yemuviri weinjini kana injini iri kushanda, mafuta anonamira pamusoro peiyo injini yemuviri anozobuda zvishoma nezvishoma oburitsa hwema hwakaipa. Muzviitiko zvakakomba, mafuta anozopinda mumota pamwe neyemhepo mamiriro, ichikanganisa nharaunda yemotokari.
Chechipiri, kana chevhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhu yemvura ichidonhedza kunamatira kwemafuta painjini yekuwandisa yakawanda, zvinokuvadza ipapo hazvisi nyore, kuravira kwakapinza, mota inomhanya kwazvo muzhizha rinopisa, nekuti tembiricha yeiyo yakawanda chiutsi yakanyanyisa kukwirira, inokonzera kubatana. pane yekuwandisa yakawanda mafuta mwenje, kuvesa zvimwe zvinopisa zvinhu, zvinogona kupedzisira zvaendesa kune injini mupanda moto
Post nguva: Jan-19-2021